Maxkamaddaynta Perves Musharraf
Pakistan, 2 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Maxkamad ku taala wadanka Pakistan ayaa diiday inuu wadanka ka dhoofo Madaxweynihii hore ee milateriga ahaa Mr. Perves Musharraf si uu isaga soo daweeyo wadamada debeda ah. Maxkamadan ayaa sheegtay in daaweeynta Musharraf ay tahay mid beena ah, isla markaana ay saaran tahay cunaqabatayn ah inaanu wadanka ka bixi karin.
Jimcihii la soo dhaafay ayey maxkamadu u soo gooysey warqadii xadhigiisa iyagoo ku sheegay inuu maxakamadiisa dhegeysigeedu uu dhaci doonto bisha febraayo 7keeda loona ogol yahay inuu bixiyo lacag
Musharraf oo 70 jira ayaa lagu haystaa qodobo dhowr ah oo la xidhiidha waqtigii uu xukunka haystay,oo ay ka mid tahay xaaladii degdega ahayd ee uu geliyey wadanka Pakistan iyo dilkii waqtigaas la dilay Gudoomiyihii Xisbigii Dadweynaha pakistan Benazir Bhutto,iyo weliba xukuno uu joojiyey waqtigiisii.
Musharraf ayaa wadanka Pakistan xukumaayey sanadihii 1999-2008,waxuuna in mudo ah ku jiray Cusbitaal Milaterigu leeyahay oo lagaga daweynaayey xanuun xaga wadnaha ah .
Arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo qareemadiisu ay sheegayaan inuu u baahan yahay inuu soo arko dhaqaatiir cilmiga wadnaha aad u yaqaana oo debada ah,isla markaana uu xukunkiisu uu dib uga soo dhacay waqtigii maxkamadiisa oo ahayd bishii December.